रारा घुम्न गाडी र हवाईमा छुट्टै अफर, कुनमा कति खर्च ? - MeroAuto
रारा घुम्न गाडी र हवाईमा छुट्टै अफर, कुनमा कति खर्च ?
2076:6:17 7:02 AM
काठमाडौं । नेपालीहरुको विशेष चाड दशैं सुरु भइसकेको छ । चाडपर्वको अवसरमा नयाँ ठाउँको घुमफिर गर्ने र रमाइलो गर्ने चाहाना सबैको हुन्छ । यस्तो अवसरमा पोखरा, चितवन, मुक्तिनाथ, रारा, खप्तड, जनकपुर, इलाम, हलेसी महादेब, लुम्बिनीलगायतका स्थानमा पर्यटकको घुइचो लाग्ने गर्छ । पछिल्लो समय, आन्तरिक पर्यटकको निक्कै घुइचो लाग्ने स्थान मध्ये एक हो, रारा ।
विकट मानिएको कर्णाली अञ्चलको मुगु स्थित रारा ताललाई प्रकृतिको अनुपम उपहारको रुपमा लिइन्छ । विस्तार हुँदै गएको यातायात तथा हवाई सुविधाको कारण रारा यात्रा बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ । शाहसी पर्यटन तथा ट्रेकिंगको लागि बढि रुचाइने रारामा वर्षेनी हजारौं पर्यटकको घुईचो लाग्ने गरेको छ ।
रारा भ्रमणका लागि विशेषत सेप्टेम्बरदेखि अक्टोवरको बीचमा बढि जाने गर्छन । अझै विभिन्न प्याकेज प्रदान गर्दै आएकाले ट्राभल एजेन्सीले रारा भ्रमणलाई सहज बनाइदिएका छन् । एजेन्सीले यात्रीको आवश्यकता र इच्छा बमोजिम प्याकेजमा घुमफिरको व्यवस्था मिलाइ दिने गरेका छन् । यस्ता एजेन्सीले जिप, कार, बस, तथा हवाई प्याकेजमार्फत रारा घुम्ने अवसर प्रदान गर्दै आएका छन् ।
एजेन्सी अनुसारको फरक प्याकेज
चार वर्षदेखि रेन्टल कम्पनी ‘भेहिकल रेन्टल इन काठमाडौं’ र ‘एम.के भेहिल’ संचालन गर्दै आएका मुकेश गुप्ताले रारा ताल घुम्न जाने यात्रीलाई यातायातको सुविधा प्रदान गर्दै आएका छन् । यात्रीले एजेन्सीले प्रदान गर्ने ६ रात सात दिनको प्याकेजमा प्रतिव्यक्ति २१ हजारमा रारा भ्रमण गर्न पाउने गुप्ता बताउँछन् ।
‘पछिल्लो समय रारा तालमा पर्यटकको निक्कै घुइचो लाग्न थालेको छ । विशेषत, प्याकेजमा घुम्न जाने यात्रीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । रारा भ्रमणमा निस्केका यात्रीबाटै राम्रो प्रतिक्रिया आउने गरेको छ’, गुप्ताले मेरोअटोसँग भने ।
रारा भ्रमणका क्रममा सबै किसिमका सेवा दिनेगरि प्याकेजको व्यवस्था भएकाले ग्राहकले चाहे बमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने उनले बताए । निश्चित प्याकेजमा भरपुर आनन्दसँगै सुरक्षित यात्राका लागि आफ्नो कम्पनी उत्कृष्ट छनौट हुने उनको दाबी छ ।
अर्काे ट्राभल एजेन्सी न्यु अराइभलका संचालक रमेश घिमिरेले रारा गन्तव्यको लागि २४ हजारको प्याकेज आफुले बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए । सकेसम्म थोरै रकममा रारा घुमाउने लक्ष्य अनुसार आफूहरुले शुल्क निर्धारण गरेको घिमिरेको दाबी छ ।
यस्तै, प्रतिव्यक्ति २२ हजार शुल्क निर्धारण गरेको इमेस होलिडेले ६ रात सात दिनको प्याकेजमा रारा घुमाउँदै आएको छ । अर्काे, स्कर्पियो जिप रेन्टल नेपालले पनि २२ हजार पाँच सयको प्योकजमा रारा घुमाउने गरेको छ । यातायातको सुविधालाई सहज बनाउदै आएका यस्ता ट्राभल कम्पनीले आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण कार्य गर्दै आएका छन् ।
हवाई यात्राबाट छिटो रारा पुगेर फर्कन चाहने पर्यटकलाई ३४ हजारमा दुई रात ३ दिनको हवाई प्याकेजमा रारा घुमाउदै आएको इमेस होलिडले जानकारी दिएको छ ।
स्टाइलिस स्कुटर चाहनेलाई...
दशैं विदामा पनि सिप्रदीको...